त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कमल फूलको प्रतिमा राख्नु गलत निर्णयः विज्ञहरू - Lekhapadhi.com देश : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कमल फूलको प्रतिमा राख्नु गलत निर्णयः विज्ञहरू
लेखक : लेखापढी १३ बैशाख २०७९, मंगलवार १६:४९ मा प्रकाशित
नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने व्यथितीका बारेमा मात्र लेख्ने र बोल्ने होईन । हामीले राम्रो कुराको मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्ने गरेका छौं ।
त्यस्तै विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारबाट ५० मिटर भित्र रहेको गोल पार्कमा भगवान गौतम बुद्धको मुर्ति राख्ने भनिएको रहेछ, सम्भवत राखेको भए संसारभर गएर ‘बुद्ध वाज वर्ण इन नेपाल’ (Buddha was born in Nepal) को रटान लगाउने हामी नेपालीले पक्कै पनि यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने थियौं ।
तर यतिबेला हाम्रा छुच्चा र तिता लाग्ने शब्द खर्चिने भएका छौं । किन हामी छुच्चा र तिता शब्द खर्चिन लागेका हौं भन्ने प्रशंगमा प्रवेश गरौं, के राख्ने ? कसको मुर्ति राख्ने भन्ने बारे सुरुमा फोन गर्दा “मलाई जानकारि छैन, म सम्वन्धितसँग बुझ्छु, पाँच मिनेटपछि कल पाउन” भनेका त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका महानिर्देशक टेकनाथ सिटौलाले पाँच मिनेटमै फोन गर्दा फोन उठाएनन् । सम्बन्धित निकायले फोन उठाए भने म सबै कुरा बुझेर यहाँलाई कल गर्छु भनेका थिए ।
महानिर्देशक जस्तो जिम्मेवार मान्छे एउटा पत्रकारलाई के सम्झन्थे र फोन गर्थे भन्ने ठानेर आफैले झण्डै एक घण्टापछि आफै फोन गर्यौ । फोनमा उनले भनेको कुरा सुनेर हामी छक्क परे । महानिर्देशक सिटौलासँग फोनमा गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै यस अघिको लेखापढी म्याग्जिनको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
पानीको पोखरी माथि स्तम्भ उठाई भगवान गौतम बुद्धको मुर्ति राख्दा धर्मसँग जोडिएका कन्ट्रोभर्सी कुरा आउने भन्ने महानिर्देशकको भनाई कुन अर्थमा सत्य होला ? नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धको आकृति राख्दा बिबाद हुन्छ भन्ने भनाई उहाँको अभिव्यक्ति र उक्त आकृति नराख्न सुझाब दिने बिज्ञ को होला यो देशमा ?
हाल कमलको फूल राख्ने निर्णय गरियो अचम्म र लाजमर्दो कुरो यहाँनिर छ । उसो त कमलको फूल भारतको राष्ट्रिय फूल हो भनेर पनि त कन्ट्रोभर्सी हुन सक्छ । कमलको फूल भारतीय जनता पार्टीको चुनाब चिन्ह पनि हो, के यो अर्थमा बिबाद निम्तिन नसक्ला भन्न सकिदैन तथापि कुनै बिबादित कुरा गर्नु भन्दा पनि नेपाली मौलिकता झल्किने कुनै आकृति तिर ध्यान केन्द्रित हुन् नसक्नु ठुलो गल्ति हो । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनिरहँदा एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्यद्वार नजिकै ठुलै बुद्धको मुर्ति राख्दा हाम्रो सान उचो नै हुने थियो । यद्धपी भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल नै निर्माण भएकोले बुद्धको मुर्ति जत्रो राखे पनि उतै राखौंला भन्ने सोच पलाउनु स्वाभाविक हो । मुर्ति नै राख्ने भए राजा त्रिभुवनको नामसँगै मिल्ने उनैको मुर्ति राख्दा के फरक पर्थ्यो होला र कमलको फूल राख्ने अचम्मको निर्णय अझ भनौं सोच नै कसरि आयो होला ?
समाज शास्त्री डा. दिलिप कुमार मल्ल का अनुसार “निर्माण कम्पनीलाई यो नराख त्यो राख भन्ने बिज्ञ को हुन् होला ? डाक्टर मल्ल प्रश्न गर्दै अगाडी भन्छन्, महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु दोस्रो अचम्मको कुरा, आस्चर्य लागिरहेको छ मलाई उनि भन्छन् । नेपालको धर्म, संस्कृती र परमपरा माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ, यो त्यही श्रृखलाको एउटा खण्ड हो ।” यसैगरी राप्रपा नेता तथा धार्मिक प्रचार-प्रसार विभागका प्रमुख पुष्पराज पुरुष भन्छन्- “ऐतिहासिक नाम जोडिएका संघ संस्थाको नाम फेर्नु, राष्ट्र बैंकद्वारा इस्वि सम्वत लेखिनु, सरकारी कर्मचारिले सर्ट पाईन्ट लगाउनु, नेपाली भाषालाई त्यती महत्वका साथ नलिनु आदि कार्यबाट सरकार, राजनैतिक दल र अधिकांश नेताहरु यो देशको अस्तित्व जोगाउन भन्दा मेट्न तिरै मरिमेटि लागेको सहजै अनुमान् गर्न सकिन्छ, उनले भने ।” बुद्धको मुर्ति राख्दा कुन खालको धार्मिक विखण्डन वा कन्ट्रोभर्सी हुन्छ ? बुद्धको मुर्ति नराखेर कुन मुस्लिम वा कुन क्रिष्चियन प्रभुलाई खुसी पार्न खोजिएको हो ? लौ बुद्धको मुर्ति राखिएन रे, नाम अनुसार राजा त्रिभुवनको राख्दा हुँदैन र भन्या ? यहीबाट स्पष्ट यो हुन्छ कि यो राज्यको सरकार हाम्रो मौलिक संस्कृती र इतिहास निमिट्याम्म पार्न लागि परेको छ । यस्तो नालायक हर्कत र यिनको गलत कृयाकलापलाई समयमै हामीले खबरदारी गर्नै पर्दछ पुष्पराज पुरुष भन्छन् । विश्व साईकल यात्री पुस्कर शाह पनि २०४६ सालका एक योद्धा हुन्, असल राजनैतिक परिवर्तन चाहने शाह २०४६ पछिका हरेक परिवर्तनमा लडेका युवा हुन् । शाह भन्छन- परिवर्तनको नाममा हाम्रो परम्परा र संस्कृती माथि नै धावा बोल्ने जस्तो परिवर्तन हामीले चाहेको होईन् । त्यसैले बुद्धको मुर्ति नराखी कमलको फुल राखिएकोमा उनको पनि असहमति छ । लौ बु्द्धको मुर्ति राखिएन विमानस्थलको नाम अनुसारकै राजा त्रिभुवनको शालिक राख्दा भइहाल्यो नी शाह भन्छन् ।
यस्तै नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यात पनि यो कुरामा सहमत छैनन् । यस बारेमा राम्रो सँग बुझ्नै पर्ने भयो डाक्टर बस्न्यात भन्छन् । भगवान गौतम बुद्धको मुर्ति राख्दा कसैको असहमति भन्ने नै हुँदैन, ठिकै छ राखिएन, त्यसो त राजा त्रिभुवनको राखेको भए एउटा इतिहास त हाम्रो सामु हुन्थ्यो, डाक्टर बस्न्यात थप्छन।
त्यस्तै यसबारेमा आफ्नो मत राख्दै प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, “यो राज्यमा पछिल्लो पटक भएका यस्ता खालका गलत हर्कतको एकजुट भइ लड्नुको विकल्प छैन । हाम्रो मौलिक संस्कृती र परमपरा के कमलको फूल राख्दा झल्किन्छ त ? सरासर बु्द्धको मुर्ति राखिनु पर्ने हो । त्यो भएन राजा त्रिभुवनको शालिक राखे भइहाल्यो नी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामसँग मेल खाने डा. भण्डारी भन्छन् ।”
यो पनि पढ्नुस खास के रहेछ- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे ठुलो गोल पार्कमा कमलको फूलको आकृति नै किन राखिदैछ ?
प्रदेश ५ काे राजधानी भालुवाङ,नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णयः कतै विराेध, कतै समर्थन
सङ्क्रमित कर्मचारीलाई बिदा,घरमै बसे १४ दिन, हस्पिटलमा अवधिभर
चीनले “लाइन अफ सेपेरेसन”बनाउदै सगरमाथाको शिखर
साम्राज्यवाद, बिस्तारवाद बिरूद्व कालो झण्डा र व्लाक आउट: रास्ट्रिय सरोकार मंच
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा शुक्रबारबाट क्यालिब्रेसन फ्लाइट